Mamely ny Nosy any Pasifika Atsimo ny Rivo-doza Gita | Vaovao JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tailandey Tenin’ny Tanana Italianina Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Yorobà
Mamely An’ireo Nosy any Pasifika Atsimo ny Rivo-doza Gita
Nandalo tany Samoa sy Samoa Amerikanina ny Rivo-doza Gita tamin’ny 10 sy 11 Febroary 2018. Nihanahery vaika ilay rivo-doza. Nandalo tany Tonga koa izy io tamin’ny 12 Febroary ka nahatonga tondra-drano sy nanimba zavatra be dia be.
Tsy nisy Vavolombelon’i Jehovah naratra mafy na matin’io rivo-doza io. Betsaka anefa ny trano simba be. Ny Komitin’ny Vonjy Rano Vaky no nanampy tamin’ny fizarana fanampiana ka nahazo labasy sy sakafo ary zavatra hafa ny tra-boina.
Nisy trano folo simba be tany SAMOA.
Trano telo no simban’ny rano tany SAMOA AMERIKANINA. Mipetraka any amin’ny Vavolombelon’i Jehovah namany àry aloha izay tsy maintsy niala tamin’ny tranony.
Enina, fara fahakeliny, ny trano simba be tany TONGA. Nampiasaina àry ny Efitrano Fanjakana mba hipetrahan’izay rahalahy sy anabavy tsy manan-kialofana.
Faly isika fa tsy nisy Vavolombelon’i Jehovah naratra mafy tamin’iny loza iny. Manome an’izay ilain’izy ireo koa ny mpiara-manompo. Mampiseho izany fa mifankatia isika. Io toetra io mihitsy ilay nolazain’i Jesosy hoe hamantarana ny tena mpanara-dia azy.—Jaona 13:34, 35.
Samoa Amerikanina: Panapa Lui, +1-684-770-0064
Samoa: Sio Taua, +685-20 629
Tonga: Palu Kanongata’a, +676-25 736